Yini okumele kwenziwe uma usola isifo sikashukela > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ungahlolwa kanjani isifo sikashukela?
Siphakamisa ukuthi uzijwayeze nendatshana esihlokweni esithi: "yiziphi izivivinyo ezizodlula uma usola isifo sikashukela" ngamazwana avela kochwepheshe. Uma ufuna ukubuza umbuzo noma ukubhala imibono, ungakwenza lokhu kalula ngezansi, ngemuva kwendatshana. Uchwepheshe wethu we-endoprinologist uzokuphendula ngokuqinisekile.
Ukuhlolwa kwesifo sikashukela okusolwayo: yini okufanele ithathwe?
Isifo sikashukela i-mellitus ngesinye sezifo ezijwayelekile ze-metabolic. Lapho kwenzeka, amazinga kashukela egazi akhuphuka ngenxa yokuthuthuka kokukhiqizwa okunganele kwe-insulin ngohlobo 1 sikashukela nokungakwazi ukuphendula i-insulin ngohlobo 2 sikashukela.
Cishe ikota yalabo abanesifo sikashukela abayazi ukugula kwabo, ngoba izimpawu ezisekuqaleni azivami ukuthi zivezwe.
Ukuze uthole ushukela kusenesikhathi futhi ukhethe ukwelashwa okudingekayo, kufanele uhlolwe. Kulokhu, kwenziwa igazi kanye nomchamo.
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela zingavela zombili ngokuzumayo - ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, futhi zikhule ngokuhamba kwesikhathi - ngohlobo lwesifo sikashukela esingathembisi i-insulin.
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 sivame ukuthinta abantu abasha nezingane.
Uma lezo zimpawu zenzeka, ukubonana okuphuthumayo kuyadingeka:
Ukoma okukhulu kuqala ukuhlukumeza.
Ukuchama kaningi kanye nephrofayili.
Iqembu eliyingozi lesifo sikashukela lifaka izingane zabazali abanesifo sikashukela, abaye baba nokutheleleka ngegciwane ukube bengaphezu kwama-4.5 kg ngokuzalwa, nezinye izifo ze-metabolic, kanye nokugomela okuphansi.
Ezinganeni ezinjalo, ukubonakaliswa kwezimpawu zokoma nokulahlekelwa isisindo kukhombisa isifo sikashukela kanye nomonakalo omkhulu wamanyikwe, ngakho-ke kunezimpawu zakuqala ukuthi udinga ukuxhumana nomtholampilo:
Khulisa isifiso sokudla amaswidi
Kunzima ukubekezelela ikhefu ekudleni ukudla - kukhona indlala nekhanda
Ihora noma amabili ngemuva kokudla, kubonakala buthakathaka.
Izifo zesikhumba - i-neurodermatitis, izinduna, isikhumba esomile.
Esikhathini sikashukela sohlobo lwesibili, izimpawu ezisobala ziyavela ngemuva kwesikhathi eside ngemuva kokukhuphuka koshukela wegazi, zithinta ikakhulukazi abesifazane ngemuva kweminyaka yobudala engama-45, ikakhulukazi ngempilo yokuhlala phansi, ngokweqile. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi kule minyaka, wonke umuntu, kungakhathalekile ukuba khona kwezimpawu, ahlole izinga likashukela wegazi kanye ngonyaka.
Lapho kuvela izimpawu ezilandelayo, lokhu kumele kwenziwe ngokuphuthumayo:
Umile, umlomo owomile.
Ukomiswa nokulunywa kwesikhumba (ukulunywa kwezintende nezinyawo).
Ukudonsa ngamandla noma ukusindeka kutholakale kalula.
Izifo ezithathelwanayo ezijwayelekile.
Ukukhathala, ubuthakathaka obukhulu.
Ukuchama kaningi, ikakhulukazi ebusuku.
Ukusikeka, amanxeba aphulukisa kahle, amafomu wezilonda.
Isisindo esingahlobene nezinkinga zokudla.
Ngokujikeleza okhalweni kwabesilisa abedlula i-102 cm, abesifazane - 88 cm.
Lezi zimpawu zingavela ngemuva kwesimo esinzima sokucindezela, i-pancreatitis yangaphambilini, ukutheleleka ngegciwane.
Konke lokhu kufanele kube yisikhathi sokuvakashela udokotela ukuthola ukuthi yiziphi izivivinyo okudingeka zenziwe ukuqinisekisa noma ukungafumani ukutholakala kwesifo sikashukela.
Izivivinyo ezifundisayo kakhulu zokuthola isifo sikashukela yilezi:
Ukuhlolwa kwegazi koshukela.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose.
Izinga le-hemoglobin le-glycated.
Ukunqunywa kwamaprotheni e-C-reactive.
Ukuhlolwa kwegazi nge-glucose kwenziwa njengovivinyo lokuqala lwesifo sikashukela futhi kukhonjiswa abasolwa abalimele i-carbohydrate metabolism, ngezifo zesibindi, ngesikhathi sokukhulelwa, isisindo esandayo nezifo ze-thyroid.
Kwenziwa ngesisu esingenalutho, kusukela ekudleni kokugcina kufanele kudlule okungenani amahora ayisishiyagalombili. Kuphenywe ekuseni. Ngaphambi kokuhlolwa, kungcono ukukhipha umsebenzi wokuzivocavoca.
Kuya ngenqubo yocwaningo, imiphumela ingahluka ngokwezibalo. Ngokwesilinganiso, okujwayelekile kububanzi ukusuka ku-4.1 kuye ku-5.9 mmol / L.
Emazingeni ajwayelekile kashukela egazini, kepha ukutadisha ikhono lamanyikwe ukuphendula ekwandeni kwe-glucose, kwenziwa isivivinyo sokubekezelela i-glucose (GTT). Kubonisa ukuphazamiseka okufihliwe kwe-carbohydrate metabolism. Izinkomba ze-GTT:
Khulisa ushukela ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwama-hormone.
I-Furunculosis kanye nesifo se-periodontal.
Ukulungiselela ukuhlolwa: ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuhlolwa, ungenzi ushintsho ekudleni okujwayelekile, phuza amanzi ngevolumu ejwayelekile, ugweme ukujuluka ngokweqile kwezinto, kufanele uyeke ukuphuza utshwala usuku lonke, akufanele ubheme futhi uphuze ikhofi ngosuku lovivinyo.
Ukuhlolwa: ekuseni esiswini esingenalutho, ngemuva kwamahora ayi-10-16 wokulamba, isilinganiso se-glucose silinganiswa, khona-ke isiguli kufanele sithathe u-75 g we-glucose oncibilikisiwe emanzini. Ngemuva kwalokho, ushukela ukalwa ngemuva kwehora elilodwa namahora amabili kamuva.
Imiphumela yokuhlola: kufika ku-7.8 mmol / l - lokhu kuyinto ejwayelekile, ukusuka ku-7.8 kuya ku-11.1 mmol / l - ukungalingani kwe-metabolic (prediabetes), konke okuphakeme kune-11.1 - isifo sikashukela.
I-hemoglobin ye-Glycated ikhombisa ukugxila okujwayelekile kweglue glucose ezinyangeni ezintathu ezedlule. Kufanele inikezwe njalo ezinyangeni ezintathu, zombili ukukhomba izigaba zokuqala zesifo sikashukela nokuhlola umphumela wokwelashwa obekiwe.
Ukulungiselela ukuhlaziya: chitha ekuseni usesiswini esingenalutho. Akufanele kube ne-infusions yokungena emzimbeni kanye nokopha kakhulu ezinsukwini zokugcina ezingama-2-3.
Kukalwa njengephesenti le-hemoglobin ephelele. Imvamisa, i-4.5 - 6.5%, isigaba se-prediabetes singama-6,6,5%, isifo sikashukela siphezulu kuno-6.5%.
Ukuchazwa kwamaprotheni e-C-esebenzayo kukhombisa izinga lokulimala kwamanyikwe. Kuboniswa ucwaningo ku:
Ukuthola ushukela emchameni.
Ngokubonakaliswa kwemitholampilo kwesifo sikashukela, kepha ukufundwa koshukela okujwayelekile.
Ngokuthola izakhi zofuzo kushukela.
Khomba izimpawu zesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngaphambi kokuhlolwa, awukwazi ukusebenzisa ama-aspirin, uvithamini C, izivimbeli, ama-hormone. Kwenziwa ngesisu esingenalutho, ngemuva kwamahora ayishumi endlala, ngosuku lokuhlolwa ungaphuza kuphela amanzi, awukwazi ukubhema, ukudla ukudla. Bathatha igazi emthanjeni.
Imvamisa ye-C-peptide isukela ku-298 kuya ku-1324 pmol / L. Ngohlobo 2 sikashukela, kuphezulu; izinga lokudonsa lingaba ngohlobo 1 nokwelashwa kwe-insulin.
Imvamisa, akufanele kube noshukela ekuhlolweni umchamo. Ngocwaningo, ungaphuza umthamo wasekuseni womchamo noma nsuku zonke. Uhlobo lokugcina lokuxilonga lufundiseka kakhudlwana. Ukuze uqoqwe ngokufanele umchamo wansuku zonke, kufanele uhambisane nemithetho:
Ingxenye yasekuseni ihanjiswa esitsheni kungakadluli amahora ayisithupha ngemuva kokuqoqwa. Ama-servings asele aqoqwe esitsheni esihlanzekile.
Okosuku awunakudla utamatisi, beet, izithelo zezithelo zomnqumo, izaqathi, amathanga, i-buckwheat.
Uma ushukela kutholakala umchamo kanye nokufakwa ngaphandle kwe-pathology kungadala ukwanda kwayo - i-pancreatitis esigabeni esibuhlungu, ukusha, ukuthatha izidakamizwa ze-hormonal, kutholakala ukuthi unesifo sikashukela mellitus.
Ngokucwaninga okuningiliziwe futhi uma ungabaza ekutholweni, lezi zivivinyo ezilandelayo zingenziwa:
Ukunqunywa kwezinga le-insulin: okujwayelekile kusuka ku-15 kuye ku-180 mmol / l, uma kuphansi, khona-ke lolu hlobo oluncike ku-insulin 1 isifo sikashukela, uma i-insulin iphakeme kunaleyo evamile noma engaphansi kwemingcele evamile, lokhu kubonisa uhlobo lwesibili.
Ama-pancreatic beta-cell antibodies anqunywa ekuhlolweni kusenesikhathi noma kusengaphambili ukuthayipha isifo sikashukela 1.
Ama-antibodies kuya ku-insulin atholakala ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nesokuqala kwesifo sikashukela.
Ukuchazwa komaka wesifo sikashukela - amasosha omzimba ukuya ku-GAD. Leli iprotheni elithile, ama-antibodies kulo lingaba yiminyaka emihlanu ngaphambi kokukhula kwesifo.
Uma usola isifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukuthi uhlole ngokushesha ukuze uvikele ukuthuthuka kwezinkinga ezisongela impilo. Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ungasithola kanjani isifo sikashukela. Ividiyo ekulesi sihloko izokukhombisa ukuthi yini okudingeka ukuthi uhlolwe isifo sikashukela.
Yiziphi izivivinyo okufanele zithathwe uma usola ukuthi unesifo sikashukela: amagama ezifundo eziphambili nezengeziwe
Imvamisa abantu abanenkinga ye-endocrine bathi izimpawu zabo ziya eminyakeni, ukukhathala okungapheli, ukuntuleka kokulala, njll.
Ake sibheke ukuthi yiziphi izivivinyo zesifo sikashukela okufanele zinikezwe umuntu ngamunye ukuze zazi ngesimo sazo ngesikhathi, okusho ukuthi zizivikele emiphumeleni emibi yeglucose ephezulu yegazi.
Yiziphi izimpawu okudingeka uhlole ngazo isifo sikashukela emtholampilo?
Ukuhlaziywa okuvumela ukuthi unqume okuqukethwe i-glucose esegazini kutholakala kuwo wonke umuntu - kungathathwa ngokuphelele kunoma yisiphi isikhungo sezokwelapha, noma ngabe sikhokhelwe noma esidlangalaleni.
Izimpawu ezibonisa ukuthi kufanele uthintane nodokotela ngokushesha:
Ubungakanani bezimpawu kuncike esikhathini sesifo, izici zomzimba womuntu kanye nohlobo lwesifo sikashukela.
Isibonelo, uhlobo oluvame kakhulu lwayo, olubizwa ngokuthi lwesibili, lubonakala ngokuqina kwesimo kancane kancane, abantu abaningi baphawula izinkinga emizimbeni yabo esivele isesiteji esithuthukile .ads-mob-1
Njengomthetho, iningi labantu elisolayo ukuba khona kokuphazamiseka kwe-metabolic emizimbeni yabo liphendukela kumelaphi kuqala.
Ngemuva kokunquma ukuthi kuhlolwe igazi nge-glucose, udokotela uvivinya imiphumela yayo, futhi uma kunesidingo, uthumela umuntu lowo ku-endocrinologist.
Uma ushukela ujwayelekile, umsebenzi kadokotela ukuthola ezinye izimbangela zezimpawu ezingathandeki. Ungaphendukela naku-endocrinologist ngokwakho, ngoba ukwelashwa kwesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo kuyikhono lodokotela onjalo.
Inkinga kuphela ukuthi kude kakhulu nazo zonke izikhungo zezempilo zikahulumeni lochwepheshe okhona.ads-mob-2
Yiziphi izivivinyo engizidingayo ukuze ngihlolwe isifo sikashukela?
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela kubandakanya izifundo eziningana ngasikhathi sinye. Ngenxa yendlela ehlanganisiwe, udokotela angakhomba ubulukhuni bokwephulwa kwe-carbohydrate metabolism, uhlobo lwesifo, nezinye izici, ekuvumela ukuthi unikeze ukwelashwa okwanele.
Ngakho-ke, izifundo ezilandelayo ziyadingeka:
ukuhlolwa kweglucose yegazi. Inikezwa ngokuqinile esiswini esingenalutho, kusuka emunweni noma emvinini. Umphumela ubonwa njengokujwayelekile ebangeni ukusuka ku-4.1 kuye ku-5.9 mmol / l,
ukuzimisela kwezinga le-hemoglobin ye-glycated. Isikhombi esibaluleke kunazo zonke esenza kube lula ukubona ubunzima bokuphazamiseka emzimbeni. Ibonisa ushukela ojwayelekile weglue wezinyanga ezintathu ngaphambi kokuqoqwa kwe-biomaterial. Ngokungafani nokuhlolwa kwegazi okujwayelekile, okuncike kakhulu ekudleni nakwizinto eziningi ezihlobene, i-hemoglobin ye-glycated ikuvumela ukuba ubone isithombe sangempela salesi sifo. Iminyaka ejwayelekile ukuya eminyakeni engama-30: ngaphansi kuka-5.5%, kuze kufike ku-50 - hhayi ngaphezulu kuka-6.5%, esemdala - kuze kufike ku-7%,
ukuvivinya ushukela. Le ndlela yokuxilonga (ngokuzivocavoca) ikuvumela ukuthi unqume ukuthi umzimba ulukhipha kanjani ushukela. Igazi lithathwa esiswini esingenalutho, khona-ke isiguli sinikezwa isisombululo se-glucose ukuphuza, ngemuva kwehora elilodwa noma amabili, i-biomaterial iyabuye ithathwe. Inani elifinyelela ku-7.8 mmol / L libhekwa njengejwayelekile, ukusuka ku-7.8 kuya ku-11.1 mmol / L - isimo sangaphambi kwesifo sikashukela, ngaphezulu kuka-11.1 - isifo sikashukela,
ukuzimisela kweprotheni ye-C-esebenzayo. Ibonisa ukuthi ama-pancreas athinta kanjani. Isikhathi esijwayelekile: 298 kuya ku-1324 mmol / l. Ukuhlolwa kwenziwa ngenhloso yokuthola isifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa, kanti futhi uma lelo zinga likashukela egazini kuyinto evamile, kanti nezimpawu zomtholampilo ze-carbohydrate metabolism zikhona.
Yini igama lokuhlolwa kwegazi elabhorethri ukuqinisekisa isifo sikashukela?
Ngaphezu kwezivivinyo ezibhalwe ngenhla, ukulethwa okuphoqelekile ekuxilongeni isifo sikashukela, kungahlolwa ezinye izivivinyo.
Nawa amagama ezinye izifundo:
ukuzimisela komaka wesifo sikashukela,
ukutholwa kwama-antibodies kuma-insulin kanye ne-beta cell yamanyikwe.
Lezi zivivinyo "zimincane" ngokwengeziwe, kungenzeka kwazo kufanele ziqinisekiswe ngudokotela.
Ukuxilongwa okwehlukile kwesifo sikashukela sohlobo lwe-1 no-2
Lolu hlobo lokuxilongwa kaningi lwenziwa ngesikhathi sokuhlolwa kokuqala ukukhomba uhlobo oluthile lwesifo sikashukela. Ngokwesisekelo, okuqukethwe kwezinga le-insulin egazini lomuntu kuthathwa.
Ngokuya ngemiphumela, enye yezindlela zesifo sikashukela ihlukaniswa:
Ukuhlaziywa futhi kukuvumela ukuba uhlukanise ngokucacile phakathi kwesifo esikhona kanye nesimo esibizwa nge- "prediabetes."
Esimweni sesibili, ukulungiswa kokudla okunempilo kanye nendlela yokuphila kuvumela ukugwema ukwanda kwalesi simo, ngaphandle kokusebenzisa umuthi.
Umuntu otholakala ukuthi unesifo sikashukela kufanele abhaliswe emtholampilo endaweni ahlala kuyo, esikhungweni esikhethekile, noma esikhungweni sezokwelapha esikhokhelwayo.
Inhloso: ukuqapha inkambo yokwelashwa, kanye nokuvikela ukuthuthukiswa kwezinkinga eziholela ekuwohlokeni okukhulu kwesimo .ads-mob-1
Ngakho-ke, uhlelo lokuhlolwa kwezokwelapha lumi ngale ndlela elandelayo:
I-algorithm yokunquma ushukela wegazi ekhaya
Indlela elula futhi ejwayelekile ukusebenzisa i-glucometer. Le divayisi kufanele itholakale kubo bonke abatholakala benesifo sikashukela.
Imithetho yesampula yegazi:
geza izandla zakho ngensipho,
yenza kancane indawo yokubhoboza ukuze igazi linamathele kule ndawo,
phatha le ndawo nge-antiseptic, ngokwesibonelo, ngendwangu ekhethekile elahlekayo noma noboya bekotoni ofakwe utshwala,
uthango ngenaliti eyinyumba yokulahla ngokuphelele. Kumamitha weshukela egazi wanamuhla, vele uchofoze inkinobho ethi "Qala", bese ukubhoboza kuzenzakalela,
lapho kuvela igazi, lisebenzise ku-reagent (strip test),
iswidi likotoni elicwiliswe etshwaleni, linamathela endaweni yokubhoboza.
Umuntu udinga kuphela ukuhlola umphumela futhi awubhale ephepheni nosuku nesikhathi. Njengoba odokotela bancoma ukuhlaziya amazinga kashukela kaningana ngosuku, kuzodingeka ukuthi ugcine “idayari” enjalo njalo .ads-mob-2
Mayelana nokuhlola okudingeka ukwenze ukuze uthole isifo sikashukela, kuvidiyo:
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela akunzima kakhulu - ngemuva kokuhlola imiphumela yezifundo ezintathu kuya kwezine kuphela, udokotela angadala isithombe esiphelele salesi sifo, anikeze umuthi wokulungisa isimo, futhi anikeze nezincomo maqondana nokudla nendlela yokuphila.
Kunenkinga eyodwa namuhla - iziguli ziza ukubona udokotela esezingeni eliphezulu, ngakho-ke sincoma ukwelapha impilo yakho ngokucophelela - lokhu kuzokusindisa ekukhubazekeni nasekufeni.
Uma usola ukuthi unesifo sikashukela, isiguli sinconyelwa ukuba sihlolwe iqoqo ukuze sitholwe ukuthi sitholakele yini, sithande uhlobo nesigaba salesi sifo. Ukucacisa isithombe somtholampilo, kungahle kudingekile ukubheka ukusebenza kwezinso, amanyikwe, ushukela, kanye nezinkinga ezivela kwezinye izitho nezinhlelo.
Ngokuya ngohlobo lwesifo sikashukela, ingazibonakalisa isencane noma isikhulile, ikhula ngokushesha noma isikhathi. Udinga ukuthi ahlolwe isifo sikashukela lapho kuvela izimpawu eziyisixwayiso ezilandelayo:
ukoma kakhulu nomlomo owomile, indlala engapheli,
ukuchama ngokweqile nokuvama, ikakhulukazi ebusuku,
ubuthakathaka nokukhathala, isiyezi, ukulahleka okungachazwanga noma inzuzo yesisindo,
ukoma, ukumiswa nokugqabha esikhunjeni, kanye namanxeba okuphulukisa angasebenzi kahle nokusikeka, izilonda, ukuqunjelwa noma ukubanjwa ngamandla.
ukukhuphuka kokujikeleza okhalweni kwabesifazane - ngenhla okungama-88 cm, emadodeni - ngaphezulu kwe-102 cm.
Lezi zimpawu zingenzeka ngemuva kwesimo esicindezelayo, i-pancreatitis eyedlule noma izifo ezithathelwanayo zemvelo yegciwane. Uma uqaphela eyodwa noma ngaphezulu zalezi zimo, unganqikazi ukuvakashela udokotela.
Ukuhlolwa kwegazi kungenye yezindlela ezethembekile zokuqinisekisa ukutholakala kwesifo sikashukela. Okuwusizo kakhulu kulokhu maqondana nokucwaninga ngezinga le-glucose ne-glycated hemoglobin, ukuhlolwa kokubekezelela ushukela.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-Glucose isivivinyo esilula esibekelwa ukuphazanyiswa okusolwayo kwe-carbohydrate metabolism. Kuboniswa futhi i-hepatic pathologies, ukukhulelwa, izifo ze-thyroid. Ucwaningo lwenziwa esiswini esingenalutho ekuseni amahora angama-8 ngemuva kokudla kokugcina noma kamuva. Ngobusuku bokusampula kwegazi, ukusebenza ngokomzimba kufanele kungafakwa eceleni. Izinga elijwayelekile liyahluka kusuka ku-4.1-5.9 mmol / L.
Ukuhlolwa kweglucose kunqunyiwe uma izimpawu zesifo sikashukela ziphawulwa kanye nokufundwa koshukela okujwayelekile. Ucwaningo lukuvumela ukuthi ukhombe ukuphazamiseka okufihliwe kwe-carbohydrate metabolism. Kunqunywe ukuthi kube ngokweqile, umfutho wegazi ophakeme, ushukela ophakeme ngesikhathi sokukhulelwa, ama-polycystic ovari, izifo zesibindi. Kufanele kwenziwe uma uthatha izidakamizwa ze-hormonal isikhathi eside noma uhlushwa i-furunculosis kanye nesifo se-periodontal. Ukuhlolwa kudinga ukulungiselela. Izinsuku ezintathu, kufanele udle ngokujwayelekile futhi uphuze amanzi anele, ugweme ukujuluka ngokweqile. Ngosuku olwandulela isifundo, kungakuhle ukuthi ungabuphuzi utshwala, ikhofi, noma intuthu. Ucwaningo lwenziwa emahoreni angama-12-14 ngemuva kokudla. Ekuqaleni, inkomba kashukela ilinganiswa esiswini esingenalutho, khona-ke isiguli siphuza isixazululo esingu-100 ml wamanzi no-75 g we-glucose, futhi isifundo siphindwa ngemuva kwamahora we-1 ne-2. Ngokuvamile, i-glucose akufanele idlule ku-7.8 mmol / l, ku-7.8-11.1 mmol / l, isifo se-prediabetes, futhi ngesibonakaliso esingaphezu kuka-11.1 mmol / l, isifo sikashukela mellitus.
I-Glycated hemoglobin iyinkomba ekhombisa ukugcwala okuphakathi kweglucose ezinyangeni ezi-3 ezedlule. Ukuhlaziywa okunjalo kufanele kwenziwe kuwo wonke ama-trimester, lokhu kuzoveza izigaba zokuqala zesifo sikashukela noma ukuhlola umphumela wokwelashwa. Ukuhlaziywa kwenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho. Akumele kube nokopha kakhulu noma ukuminza okuphathelene nezinhlungu kungakapheli izinsuku ezingama-2-3 ngaphambi kocwaningo. Imvamisa, i-4.5-6.5% iyabonakala, nge-prediabetes - 6-6.5%, nesifo sikashukela - ngaphezulu kuka-6.5%.
Uma kusolwa ukuthi isifo sikashukela, ukuhlolwa komchamo kungasheshe kukhombe ukukhubazeka okukhombisa ukukhula kwesifo. Ku-mellitus yesifo sikashukela, kufanele kuthathwe lezi zivivinyo ezilandelayo.
I-Urinalysis Ukuqasha esiswini esingenalutho. Ukuba khona kweshukela emchameni kuzokhombisa isifo sikashukela. Imvamisa, akekho.
I-Urinalysis Ikuvumela ukuthi usethe okuqukethwe okuningana kwe-glucose kumchamo phakathi nosuku. Ukuze uqoqwe ngokufanele, ingxenye yasekuseni ayinikezwa kungakapheli amahora ayi-6 ngemuva kokuqoqwa, okuseleyo kuqoqwe esitsheni esihlanzekile. Ngosuku olwandulela ucwaningo, awukwazi ukudla utamatisi, beet, izithelo zezithelo zomnqumo, izaqathi, ithanga, i-nokunye okufana nokolweni.
Ukuhlaziywa kwe-microalbumin. Ukuba khona kwamaprotheni kukhombisa ukuphazamiseka okuhambisana nezinqubo ze-metabolic. Uma kwenzeka isifo sikashukela sincike i-insulin, lokhu kuyi-nephropathy yesifo sikashukela, futhi uma sinesifo sikashukela esingancikileli e-insulin, ukuthuthukiswa kwezinkinga ezivela ohlelweni lwenhliziyo. Imvamisa, amaprotheni awekho noma abonwa ngamanani amancane. Nge-pathology, ukugcwala kwe-microalbumin ezinso kuphakama. Umchamo wasekuseni ulungele ucwaningo: ingxenye yokuqala iyakhanywa, eyesibili iqoqwe esitsheni iyiswe egumbini lokucwaninga.
Ukuhlaziywa kwezidumbu ze-ketone. Lezi yizimpawu zokuphazamiseka kwamafutha kanye nama-carbohydrate metabolism. Izidumbu zeKetone zinqunywa ezimweni zelebhu ngokwendlela yeNatelson, ngokuphendula nge-sodium nitroprusside, ngokuhlolwa kukaGerhardt, noma ukusebenzisa imichilo yokuhlola.
Ngaphezu kokuhlola umchamo negazi nge-glucose ne-protein, ochwepheshe bakhomba izivivinyo eziningi ezibekelwe abasolwa abanesifo sikashukela futhi bangabona ukwephulwa kwezitho zangaphakathi. Ukuxilongwa kungaqinisekiswa ukuhlolwa kwe-C-peptide, amasosha omzimba kumaseli we-pancreatic beta, glutamic acid decarboxylase kanye leptin.
I-C-peptide iyinkomba yezinga lomonakalo kumanyikwe. Usebenzisa isivivinyo, ungathatha umthamo ngamunye we-insulin. Ngokuvamile, i-C-peptide ingu-0.5-2.0 μg / L; ukwehla okubukhali kubonisa ukushoda kwe-insulin. Ucwaningo lwenziwa ngemuva kwamahora ayishumi endlala, ngosuku lokuhlolwa awukwazi ukubhema nokudla, ungaphuza kuphela amanzi.
Ukuhlolwa kwama-antibodies kumaseli we-pancreatic beta kusiza ukubona uhlobo 1 sikashukela. Lapho kukhona ama-antibodies, i-insulin synthesis iyaphazamiseka.
I-Glutamic acid decarboxylase inyuka ngezifo ze-autoimmune - i-thyroiditis, i-anemia enobungozi, uhlobo 1 sikashukela. Umphumela omuhle uyatholakala kuma-60-80% eziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 naku-1% wabantu abaphilile. Ukuxilongwa kukuvumela ukuthi ukhombe izinhlobo ezisusiwe kanye nezihlaselayo zesifo, ukunquma iqembu eliyingozi, ukubikezela ukwakheka kokuncika kwe-insulin ohlotsheni 2 sikashukela.
ILeptin yi-satiety hormone egqugquzela ukushiswa kwamafutha omzimba. Amazinga aphansi we-leptin aphawulwa ngokudla okunekhalori ephansi, i-anorexia. I-hormone ephakanyisiwe ingumngane wokudla ngokweqile, ukukhuluphala, uhlobo 2 sikashukela. Ukuhlaziywa kwenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho, ngemuva kwamahora we-12 wokuzila. Ngosuku olwandulela ucwaningo, udinga ukungafaki ukudla kotshwala nokunamafutha, amahora amathathu - ugwayi nekhofi.
Ukuhlaziywa kwenze ukuthi ukwazi ukwahlulela ngokuzethemba okukhulu ukuba khona kwesifo sikashukela i-mellitus, uhlobo lwaso kanye nezinga lokuphazamiseka okuhambisana nakho. Ukulethwa kwabo kufanele kuthathwe ngendlela efanele, kubhekwe zonke izincomo zikadokotela. Ngaphandle kwalokho, ubeka engcupheni yokuthola umphumela ongalungile.
Yiziphi izivivinyo okufanele zithathwe ukuthola isifo sikashukela
Isifo sikashukela yisifo esijwayelekile esinemvelo yokushintshana. Ukuxilongwa kususelwa ekutheni kuvela ukungasebenzi kahle emzimbeni womuntu, okuholele ekujabuliseni ngezinga le-glucose emzimbeni. Lokhu kuchazwa yiqiniso lokuthi i-insulin ikhiqizwa ngamanani anganele futhi ukukhiqizwa kwayo akufanele kwenzeke.
Abantu abaningi abanesifo sikashukela abakusoli ngisho lokhu, ngoba ngokuvamile izimpawu azivezwa kakhulu ekuqaleni kwesifo. Ukuze uzivikele, ukuthola uhlobo lokugula futhi uthole izincomo ezivela ku-endocrinologist, kubalulekile ukuthatha uhlolo lwegazi nomchamo ngesikhathi ukuze uthole ushukela wakho.
Labo abangakaze bahlangane nesifo kufanele bazi izimpawu eziphambili zokuqala kwalesi sifo ukuze baphendule kubo ngesikhathi esifanele futhi bazivikele.
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela sohlobo 2 yilezi:
Okusengcupheni yesifo sikashukela sohlobo lokuqala izingane ezinabazali bazo abaye bavulelwa yilesi sifo noma abanegciwane. Enganeni, ukwehla kwesisindo nokoma kubonisa ukulimala kokusebenza okuvamile kwamanyikwe. Kodwa-ke, izinkomba zokuqala zalokhu kutholakala yilezi:
isifiso sokudla amaswidi amaningi,
ukuvela kwezifo zesikhumba,
ukonakala kwe-visual acuity.
Kwabesilisa nabesifazane, isifo sikashukela siyefana. Kuthuthukisa ukubukeka kwayo kokungasebenzi kwempilo, ukukhuluphala ngokweqile, ukungondleki. Ukuze uzivikele futhi uqale inqubo yokuvuselelwa kwesikhathi, kunconywa ukuthi unikele ngegazi njalo ezinyangeni eziyi-12 ukutadisha inani le-glucose emzimbeni.
Izinhlobo eziphambili zokuhlola igazi nge-glucose
Ukuze unqume ubukhulu besifo futhi udale uhlelo lokwelashwa ngesikhathi, ochwepheshe bangabeka lezi zinhlobo zezivivinyo ezigulini zabo:
Ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile, lapho ungathola khona kuphela inani eliphelele le-dextrose esegazini. Lokhu kuhlaziywa kuhlobene kakhulu nezindlela zokuvimbela, ngakho-ke, ngokuphambuka okusobala, udokotela angakunikeza ezinye izifundo, ezinembile kakhudlwana.
Isampula yegazi ukutadisha ukuhlangana kwe-fructosamine. Ikuvumela ukuthi uthole izinkomba eziqondile ze-glucose ezazisemzimbeni izinsuku eziyi-14 - 20 ngaphambi kokuhlaziywa.
Ukucwaninga kwezinga lokubhujiswa, ngesampula yegazi esiswini esingenalutho nangemva kokudla ushukela - umbhalo wokubekezelela ushukela. Isiza ukuthola inani le-glucose ku-plasma futhi ichaze ukuphazamiseka kwe-metabolic.
Isivivinyo esikuvumela ukuthi unqume i-C-peptide, ubale amaseli akhiqiza i-insulin ye-hormone.
Ukunqunywa kwezinga lokuhlushwa kwe-lactic acid, engahlukahluka ngenxa yokuthuthukiswa kwesifo sikashukela i-mellitus.
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound kwezinso. Ikuvumela ukuthi unqume isifo sikashukela noma ezinye izifo zezinso.
Ukuhlolwa kwe-fundus. Ngesikhathi se-mellitus yesifo sikashukela, umuntu unokuphazamiseka okubukwayo, ngakho-ke le nqubo ibalulekile ekuhlolweni kwesifo sikashukela.
Amantombazane akhulelwe anikezwa ukuhlolwa kokubekezelela ushukela ukuze aqede amathuba okukhula kwesisindo somzimba we-fetus.
Ukuthola umphumela onokweqiniso kakhulu ngemuva kokuhlolwa kwegazi kwe-glucose, udinga ukulungiselela kusengaphambili futhi ukuqhube kahle ngangokunokwenzeka. Ukuze wenze lokhu, udinga ukudla amahora angama-8 ngaphambi kokuthola amasampula egazi.
Ngaphambi kokuhlaziywa, kunconyelwa ukuthi uphuze kuphela uketshezi olunamaminerali noma olungenalutho amahora angu-8. Kubaluleke kakhulu ukuyeka utshwala, ugwayi neminye imikhuba emibi.
Futhi, ungazibandakanyi nokuzivocavoca umzimba, ukuze ungahlanekezeli imiphumela. Izimo ezicindezelayo zinomthelela enanini likashukela, ngakho-ke ngaphambi kokuthatha igazi, kudingeka uzivikele ngangokunokwenzeka emizweni engemihle.
Kwenqatshelwe ukwenza ucwaningo ngesikhathi sezifo ezithathelwanayo, ngoba ezimeni ezinjalo i-glucose ngokwemvelo iyanda. Uma isiguli sithathe imishanguzo ngaphambi kokuthatha igazi, kuyadingeka ukwazisa udokotela obekhona ngalokhu.
Imiphumela yokuhlolwa kwegazi okusolisayo okusolwayo
Kwabesilisa nabesifazane abadala, ukufundwa koshukela okujwayelekile kungu-3.3 - 5.5 mmol / L, lapho kuthathwa igazi emunweni, kuthi u-3.7 - 6.1 mmol / L lapho kuthathwa ukuhlolwa kwegazi emithanjeni.
Lapho imiphumela idlula i-5.5 mmol / L, isiguli sitholakala sinesimo se-prediabetes. Uma inani likashukela "lidlula" i-6.1 mmol / l, udokotela uthi ushukela.
Ngokuqondene nezingane, amazinga kashukela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-5 ubudala zisukela ku-3.3 kuya ku-5 mmol / l. Ezinganeni ezisanda kuzalwa, lolu phawu luqala kusuka ku-2.8 luye ku-4,4 mmol / L.
Njengoba ngaphezu kwenani le-glucose, odokotela banquma izinga le-fructosamine, kufanele ukhumbule izinkomba zalo ezijwayelekile:
Kubantu abadala, bangama-205-285 μmol / L.
Ezinganeni - 195-271 μmol / L.
Uma izinkomba ziphezulu kakhulu, isifo sikashukela asitholakali ngokushesha sitholakala. Kungasho futhi isimila sobuchopho, ukungasebenzi kahle kwe-thyroid.
Ukuhlolwa komchamo kwesifo sikashukela okusolwayo kuyimpoqo. Lokhu kungenxa yokuthi, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ushukela akufanele luqukethe umchamo. Ngokufanelekile, uma kukuyo, lokhu kukhombisa inkinga.
Ukuthola imiphumela efanele, kubaluleke kakhulu ukunamathela emithethweni eyisisekelo emiswe ngochwepheshe:
Khipha izithelo zezithelo ezisawolintshi, ama-nokunye okufana nokolweni, izaqathi, utamatisi kanye nama-beet kusuka ekudleni (amahora angama-24 ngaphambi kokuhlolwa).
Nikeza umchamo oqoqiwe kungakapheli amahora ayi-6.
Ngaphezu kokuhlonza isifo sikashukela i-mellitus, ushukela emchameni ungakhombisa ukwenzeka kwe-pathologies ehambisana ne-pancreatitis.
Njengasesimweni sokuhlolwa kwegazi, ngokuya ngemiphumela yokuhlola okuqukethwe komchamo, ochwepheshe banquma ukuba khona kokuphambuka kusuka kokujwayelekile. Uma kunjalo, khona-ke lokhu kukhombisa ukungalingani okuvelile, kufaka phakathi isifo sikashukela mellitus. Kulokhu, i-endocrinologist kufanele ichaze imishanguzo efanele, amazinga kashukela alungile, ihlolwe umfutho wegazi ne-cholesterol, futhi ibhale izincomo ngokudla okuphansi kwe-carb.
I-Urinalysis kufanele yenziwe okungenani kanye ezinyangeni ezi-6. Lokhu kuzosiza ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela ukuba sikwazi ukulawula isimo futhi siphendule kunoma yikuphi ukungahambi kahle ngendlela efanele.
Kukhona okumbalwa kwe-urinalysis, okwenziwa ngokuya ngamasampula we-tehstakanoy. Kuyasiza ukukhomba ukuvela kokuqubuka kohlelo lwe-urinary, kanye nokuthola indawo okuyo.
Lapho uhlaziya umchamo, umuntu onempilo kufanele abe nemiphumela elandelayo:
Ubuningi - 1.012 g / l-1022 g / l.
Ukungabikho kwezinambuzane, izifo, isikhunta, usawoti, ushukela.
Ukuntuleka kwephunga, umthunzi (umchamo kufanele ube sobala).
Ungasebenzisa futhi imichilo yokuhlola ukutadisha ukwakheka komchamo. Kubaluleke kakhulu ukunaka ukungabambezeki kokulondolozwa kwesikhathi sokugcina ukuze umphumela ube yiqiniso ngangokunokwenzeka. Imichilo enjalo ibizwa ngokuthi ngama-glucotest. Ukuhlolwa, udinga ukwehlisa i- glucotest kumchamo bese ulinda imizuzwana embalwa. Ngemuva kwemizuzwana engama-60-100, i-reagent izoshintsha umbala.
Kubalulekile ukuqhathanisa lo mphumela nalowo okhonjiswe kwiphakheji. Uma umuntu engenayo i-pathologies, umucu wokuhlola akufanele ushintshe umbala wawo.
Inzuzo enkulu ye-glucotest ukuthi ilula futhi ilula. Usayizi omncane wenza kube lula ukuwagcina unawe, ukuze kuthi, uma kudingekile, ukwazi ukwenza lolu hlobo lombhalo ngokushesha.
Imichilo yokuhlola iyithuluzi elihle kakhulu kubantu abaphoqelelwa ukuthi bahlole njalo ushukela egazini labo kanye nomchamo.
Uma udokotela engabaza ukutholakala kwalokhu kutholakala, angakwazi ukudlulisela isiguli ukuthi senze ukuhlolwa okujulile:
Ama-antibodies kumaseli we-beta.
Umaki wesifo sikashukela.
Esimweni esijwayelekile kubantu, izinga le-insulin alidluli ku-180 mmol / l, uma izinkomba zehla ziye kufinyelela ku-14, khona-ke ama-endocrinologists aqikelela ukuthi isifo sikashukela sohlobo lokuqala. Lapho izinga le-insulin lidlula okwejwayelekile, lokhu kubonisa ukuvela kohlobo lwesibili lwesifo.
Ngokuqondene nama-antibodies kuya kumaseli we-beta, asiza ekuboneni isisusa ekwakhekeni kohlobo lokuqala lwesifo sikashukela ngisho nangasesigabeni sokuqala sokukhula kwalo.
Uma kukhona izinsolo zokuqalwa kokukhula kwesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukuxhumana nomtholampilo ngesikhathi bese wenza uchungechunge lwezifundo, ngenxa yalokho udokotela ozobe esethola isithombe esiphelele sesimo sempilo sesiguli futhi uzokwazi ukunquma ukwelashwa ukuze alulame ngokushesha.
Indima ebalulekile idlalwa yimiphumela yokuhlaziywa kwe-glycated hemoglobin, okumele yenziwe okungenani izikhathi ezi-2 ezinyangeni eziyi-12. Lokhu kuhlaziywa kubalulekile ekuhlolweni kokuqala kwesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, isetshenziselwa futhi ukulawula lesi sifo.
Ngokungafani nezinye izifundo, lokhu kuhlaziywa kukuvumela ukuthi unqume ngokunembile isimo sempilo sesiguli:
Thola ukusebenza ngempumelelo kokwelashwa okuchazwe udokotela lapho kutholwa isifo sikashukela.
Thola ubungozi bezinkinga (kwenzeka ngesilinganiso esandayo se-glycosylated hemoglobin).
Ngokwokuhlangenwe nakho kwe-endocrinologists, ngokuncipha okufika ngesikhathi kwalesi hemoglobin ngamaphesenti ayi-10 noma ngaphezulu, kunethuba lokunciphisa ubungozi bokuqalwa kwesifo sikashukela sikashukela, okuholela ebumpumputhe.
Ngesikhathi sokukhulelwa, amantombazane avame ukunikezwa lokhu kuhlolwa, ngoba kukuvumela ukuthi ubone isifo sikashukela esisebusweni bese kuvikela ingane yakho ekuqhamukeni kwama-pathologies kanye nezinkinga.
UVladislav, uVladimirovich Privolnev Diabetesic unyawo / uVladislav Vladimirovich Privolnev, uValery Stepanovich Zabrosaev und Nikolai Vasilevich Danilenkov. - M: I-LAP Lambert Academic Publishing, 2013 .-- 151 k.
I-Liberman L. L. Izinkinga zokuzala kwezentuthuko yezocansi, iMedical - M., 2012. - 232 k.
INatalya, uSergeevna Chilikina Isifo senhliziyo nesifo sikashukela esingu-2 mellitus / Natalya Sergeevna Chilikina, Akhmed Sheikhovich Khasaev und Sagadulla Abdullatipovich Abusuev. - M: I-LAP I-Lambert Academic Publishing, 2014 .-- 124 c.
Ake ngazise. Igama lami ngingu-Elena. Bengisebenza njenge-endocrinologist iminyaka engaphezu kwe-10. Ngikholelwa ukuthi njengamanje nginguchwepheshe emkhakheni wami futhi ngifuna ukusiza bonke abavakashi esizeni ukuxazulula imisebenzi eyinkimbinkimbi hhayi imisebenzi enjalo. Zonke izinto zesiza ziyaqoqwa futhi zicutshungulwe ngokucophelela ukuze kudluliswe ngangokunokwenzeka lonke ulwazi oludingekayo. Ngaphambi kokusebenzisa okuchazwe kuwebhusayithi, ukubonisana nochwepheshe okuphoqelekile kuyadingeka ngaso sonke isikhathi.
Isifo sikashukela mellitus: izimbangela, izimpawu, imiphumela
Emzimbeni womuntu, i-pancreas ngumzimba obhekele ukwenziwa kwe-insulin ye-hormone. Ubamba iqhaza ekucutshungweni kweshukela libe ushukela. Ngaphansi kwethonya lezinto ezithile, ukuphahlazeka kwesistimu kungenzeka, ngenxa yalokho kuphazamiseka kwephancreas, okungakwazi ukukhiqiza ama-hormone abalulekile ngokwanele. Umphumela onengqondo ukuqoqwa kwenani likashukela egazini, okukhishwa kanye nomchamo. Ngasikhathi sinye, inqubo yokugayeka kokudla kwamanzi iphazamisekile: amaseli womzimba awakwazi ukugcina uketshezi, ngenxa yokuthi izinso ziqala ukuba nezinkinga ezikhulayo. Ngakho-ke, uma isilinganiso se-glucose ephezulu sitholakala egazini noma umchamo womuntu, udokotela angasola isifo sikashukela.
Lesi sifo sihlukaniswe izinhlobo ezimbili:
Kuncike kwe-insulin. Ezimweni eziningi, inkambo yesifo sikashukela iqinile. Lesi sifo sinemvelo ye-autoimmune, isiguli sidinga njalo ukuqaliswa kwehomoni.
I-non-insulin ezimele. Ngale hlobo lwamaseli omzimba alahlekelwa ukuzwela kwawo ku-hormone. Ukwelashwa kubandakanya ukudla okhethekile kanye nokwehla kancane kancane kwesisindo somzimba. Ukwethulwa kwe-insulin kumiselwe kuphela ezimweni ezingavamile kakhulu.
Izimbangela eziphambili zesifo sikashukela:
iminyaka engaphezu kwengu-40.
Isici salesi sifo ukukhula kwayo kancane. Esikhathini sokuqala, umuntu angahle angaziboni izimpawu, bese kuba nezimpawu ezilandelayo kancane kancane:
i-polydipsia (ukoma ngokweqile, cishe okungenakwenzeka ukuwanelisa)
ukwanda kwama-diasesis wansuku zonke,
ukulunywa nokuqina kwesikhumba,
ukwehla okubukhali noma, ngakolunye uhlangothi, ukwanda kwesisindo somzimba,
ukuphulukiswa kancane kwe-abrasions, ukusikeka, njll.
Uma kuvela uphawu olulodwa noma ngaphezulu, kuyadingeka ukuthi ngokushesha kuphumelele izivivinyo zesifo sikashukela, esizotshelwa ngaso. Njengomthetho, izifundo zibekelwa umchamo kanye negazi.
Ngokufinyelela okungafanele kudokotela, lesi sifo siyaqhubeka:
ukuhlaselwa kwe-migraine kuvame ukukhathazeka
isibindi sikhula ngosayizi,
kunomuzwa wokukhathazeka emaphethelweni aphansi,
ukuzwela kwesikhumba kuyancipha, ubuqotho babo bokwephulwa,
umfutho wegazi uyenyuka
ukuvuvukala kobuso nemilenze
isiguli siphunga i-acetone.
Ubungako besi sifo ngokuqondile buye ubude besikhathi se-hyperglycemia (isimo esibonakaliswa izinga likashukela wegazi eliphakeme njalo). Ngaphandle kokuthola ukwelashwa okufika ngesikhathi, zonke izitho nezinhlelo kancane kancane zizothinteka.
Njengamanje, ucwaningo lomchamo kungenye yezindlela ezijwayelekile zelebhu yokutholwa kwama-pathologies ahlukahlukene.
I-Biomaterial kufanele iqoqwe ekuseni, ngemuva nje kokuvuka. Kuhle ukuhlaziya yingxenye encane yomchamo ophakathi. Okokuqala udinga ukwenza inhlanzeko yezitho zangasese bese usula ngokuphelele ngethawula elihlanzekile.
Ngokwemiphumela yokuhlaziywa okujwayelekile, ushukela akufanele ube semchameni. Kuvunyelwe kuphela ukuphambuka okuncane okufika ku-0,8 mmol / L, ngoba ngakusasa isiguli singadla ukudla okumnandi.
Uma izinga likashukela wegazi liphezulu, udokotela unquma ezinye izivivinyo ezingeziwe. Lokhu kungenxa yokuthi ukuxilongwa okuyiqiniso akunakwenziwa ngesisekelo semiphumela yocwaningo olulodwa, ngoba i-hyperglycemia iwuphawu lwezifo eziningana. Noma kunjalo, uma ukuqoqwa koshukela kumchamo kungu-10 mmol / L noma ngaphezulu, lokhu kucishe kubonise ukuba khona kwesifo sikashukela. Kulokhu, umelaphi ngokushesha uqondisa isiguli ku-endocrinologist.
Ukucwaninga ngezinto eziphilayo kufanele kuqoqwe kungakapheli amahora angama-24. Lokhu kuhlaziywa kwesifo sikashukela kuyafaneleka, okungukuthi, ukuxilongwa kuyaqinisekiswa noma cha.
Ukuqoqwa komchamo kufanele kwenziwe ngokuhambisana nayo yonke imithetho, ngoba ukuthembeka kwemiphumela kuncike kulokhu.
Ngosuku olwandulela ucwaningo (akusekho) ekudleni, kuyadingeka ukukhipha:
Kuvunyelwe ukufaka u-1 isipuni sikashukela etiyeni noma ekhofi. Ukugwema ukuguqula umbala womchamo, akunconywa ukusebenzisa imikhiqizo engawudonsela amabala (ngokwesibonelo, ama-beet, ama-currant, izaqathi).
Ukuqoqa umchamo, udinga ukulungisa imbiza ehlanzekile engamalitha amathathu. Umchamo wasekuseni awukhathalelwa, kuphela izingxenye ezilandelayo zithululelwa ethangini. Imbiza yomchamo kufanele ihlale isiqandisini.
Ngemuva kwamahora angama-24, umchamo wansuku zonke kufanele uxutshwe ngobunono, uthuluzwe esitsheni esingenakuhlanzeka sika-100-200 ml bese siyiswa elabhorethri. Uma kutholakala ushukela ku-biomaterial, ukuhlolwa kwegazi kokubekezelelwa kwe-glucose nakho kunqunyelwe.
Ingxenye yesithathu yeziguli ezinesifo sikashukela iphazamise umsebenzi wezinso. Ucwaningo lubandakanya ukwenza izivivinyo ze-microalbuminuria ne-proteinuria. Imiphumela emihle ikhombisa ukuthi inkambo yalesi sifo isivele ihlanganiswa ne-nephropathy yesifo sikashukela - isimo lapho izinso zingakwazi ukwenza umsebenzi wazo ngokugcwele. Ngakho-ke, ukubonakala kwamaprotheni kumchamo kukhombisa isigaba sekwephuzile salesi sifo, lapho kucishe kube nzima ukwehlisa inqubo yokukhula kwaso.
Umphumela wokuhlolwa kwesifo sikashukela uvamile uma izinga le-microalbumin kumchamo lingaphansi kwama-30 mg / ngosuku. Ekucwaningeni kuyadingeka ukuqoqa ingxenye yomchamo wasekuseni.
I-Urinalysis yemizimba ye-ketone
Lezi zinto ziyimikhiqizo ye-metabolic eyakha esibindini. Imvamisa, izidumbu ze-ketone akufanele zitholwe ngesikhathi sokufunda okujwayelekile, lokhu kuhlolwa kwesifo sikashukela kufanele kuhlolwe uma kunephunga le-acetone emchameni nasejameni.
Kuvela ngenxa yokuthi ngokuntuleka kwe-insulin, umzimba uqala ukudiliza kakhulu ukonga kwamafutha. Umphumela wale nqubo ukwanda kwezinga le-acetone egazini, elikhishwa izithukuthuku kanye nomchamo.
Ucwaningo aludingi ukulungiselela ngokucophelela, kwanele ukwenza ukuhlanzeka ngokobulili nokuqoqa umchamo wasekuseni.
Ukuhlolwa kwegazi okwelashwa
Lapho kwenzeka isifo, amazinga kashukela uhlala ekhuphuka kwezicubu ezithinta uketshezi. Lolu cwaningo akuyona ukucubungula okuthile kwesifo sikashukela, kodwa kuboniswa kuwo wonke umuntu ngesikhathi sokuhlolwa kwezokwelapha nangaphambi kokuhlinzwa. Uma i-glucose iphakanyisiwe, kunqunyelwe izindlela zokuxilonga zokwenziwa elabhoratri.
I-biomaterial yigazi le-venous ne-capillary. Lapho utolika imiphumela, lokhu kubalulekile ukukucabanga, njengoba kuzohluka. Okujwayelekile yisinkomba esingadluli ku-5.5 mmol / l, uma igazi lithathwe emunweni, hhayi ngaphezulu kuka-6.1 mmol / l - uma kuvela kumthambo.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose
Isifo sikashukela i-mellitus singaba nefomu le-latent. Lapho wenza izifundo ezijwayelekile, kunzima kakhulu ukuyikhomba, ngakho-ke, ngokusola okuncane, udokotela unquma ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose.
Ukuhlaziywa kwe-mellitus yesifo sikashukela se-latent kungakhombisa isigaba sokuqala sesifo, esiyi-asymptomatic, kepha esivele siyingozi emzimbeni. Isikhombi esisuka ku-4,5 kuye ku-6.9 mmol / l siyasola uma igazi lithathwe esiswini esingenalutho.
Njengengxenye yokuxilongwa kwesifo sikashukela, ukuhlaziya kuhilela ukulethwa kathathu emzimbeni:
Isikhathi sokuqala - esiswini esingenalutho (okujwayelekile ukuya ku-5.5 mmol / l),
Isikhathi sesibili - ihora eli-1 ngemuva kokusetshenziswa kwesixazululo esine-glucose (ejwayelekile kufika ku-9.2 mmol / l),
Isikhathi se-3 - ngemuva kwamahora ama-2 (okujwayelekile kuya ku-8 mmol / l).
Uma, ekugcineni kocwaningo, izinga le-glucose lingehli liye esigabeni sokuqala, lokhu kukhombisa isifo sikashukela.
Ngenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekutholakaleni kwezifo. Lapho likhuphuka izinga likashukela wegazi, ingxenye enkulu yayo yonke i-hemoglobin izothuthukiswa.
Ukuhlaziywa kuhlinzeka ngemininingwane yokuqukethwe kwesilinganiso seglue ezinyangeni ezi-3 ezedlule. Okujwayelekile kubhekwa njengesinkomba esingaphansi kuka-5.7%. Uma lidlula i-6.5%, lokhu kuqinisekisiwe ukuthi kuluphawu lwesifo sikashukela.
Awudingi ukulungiselela isifundo, unganikela ngegazi nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Ngaphambi kokuqoqa umchamo, awudingi ukwenza noma yiziphi izenzo ezikhethekile. Kwanele ukwenza inhlanzeko yezitho zangasese bese uzomisa kahle ukuze amagciwane angangeni ku-biomaterial. Kuyinto engathandeki nangaphambi kokudla ukudla okumnandi nokudla okungadonsa umchamo. Ukuze uqoqe, kunconywa ukusebenzisa isitsha sokulahla umchamo, esingathenga kunoma iyiphi ikhemisi.
Ngaphambi kokuhlolwa kwegazi ngesifo sikashukela noma uma usola, kufanele uhambisane nezincomo ezilandelayo:
Emahoreni angama-8 kuya kwele-12, noma yikuphi ukudla kufanele kungafakwa. Futhi kwenqatshelwe ukuphuza utshwala neziphuzo ezimnandi zekhabhoni. Kuvunyelwe ukuphuza kuphela amanzi ahlanzekile.
Ngosuku udinga ukuyeka umsebenzi wokuzivocavoca, futhi uvikele ukucindezelwa kwengqondo nokomzwelo.
Ngosuku olwandulela ucwaningo, kuyenqatshelwe ngokuphelele ukubhema nokuxubha amazinyo akho ngokunameka okuqukethe ushukela.
Izinsuku eziningana, kubalulekile ukuyeka okwesikhashana ukuthatha umuthi. Uma lokhu kungenzeki ngokwezinkomba, kufanele wazise udokotela wakho, ngoba umuthi uthinta ushukela wegazi.
Ngaphezu kwalokho, lolu cwaningo alwenziwa ngokushesha ngemuva kwezinqubo zomzimba nokuxilonga kusetshenziswa izindlela ezinamandla.